Xog: Masuul ka tirsan Madaxtooyo Somalia oo xabsiga ay u taxaabeen Ciidamadda NISA, kadib markii uu ka dhex hadlay Masjidka Madaxtooyadda. – Hornafrik Media Network
Ciidamadda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa ka dhex watay Masjidka Madaxtooyadda Agaasimiha Hawlaha Guud ee Madaxtooyo. Waxaana lagu xiray Xabsi ay leedahay NISA, sida ay HornAfrik ku heshay Xog.
C/raxiin Muudeey oo ka mid ah Agaasime Waaxoodyadda Madaxtooyadda Somalia ayaa ka dhex istaagay Masjidka Madaxtooyo Salaadii Jimcaha ee Maanta, xilli ay Masjidka ku sugnaayeen Madaxwaynaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka, Raiisul Wasaaraha, Wasiiro, Taliyayaal Ciidan, Xildhibaano. Wuxuuna Masuuliyiintan hortooda ka akhriyay Aayado Quraan ah oo ka hadlaya Dulmiga iyo sida uusan u wanaagsanayn, isagoo sheegay in Dulmi iyo Cadaalad Darro ay ka dhex jirto Madaxtooyo, isla markaana aysan aqoon Shaqaalaha meel ay u dacwoodaan.
Muudeey waxa uu Madaxda Qaranka ku dhaliilay inay dayaceen Doorkoodii ahaa inay u cadaalad falaan Shaqaalaha Xafiisyadooda, isla markaana ay indhaha iyo dhagaha ka furaysteen Dulmiga iyo gabood falka lagu hayo. Waxaase intii uusan hadalka dhamaysan istaagay Taliyaha NISA, C/laahi Sanbaloolshe oo isugu daray Canaan iyo Gacan qaad, kadibna amray in loo taxaabo Xabsiga. iyadoo ay goobta fadhiyaan Madaxda ugu saraysa Qaranka, isagoo waliba ku tilmaamay Dhibane Muudeey inuu yahay Argagixiso.
Madaxda Qaranka ee goobta fadhiyay kama aysan hadlin Tacadiga Agaasime Muudeey uu ka cabanayay oo si ficil ah hortooda loogu sameeyay. Waxaana hadda uu Agaasimaha ku jiraa Xabsiga NISA.
Waa Markii ugu horaysay ee Masuul ka tirsan Madaxtooyadda Somalia uu meel fagaare ah Madaxda hortooda uga sheego dhibaatadda ka dhex jirta Madaxtooyadda Somalia. Waxaana mudooyinkan Madaxtooyo ka dhex jiray is xulufaysi iyo kala riixasho Xilalka hoose, iyadoona Masuuliyiin ka tirsanaa Madaxtooyo waraaqo laga dhigay Banaanka si aysan u soo galin Xafiisyadooda.
Dowladda Somalia oo sheegtay in Dadkii lagu xasuuqay Bariire ay ahaayeen Alshabaab.